I-Dutch top 3 ehlakaniphile kwihlabathi, ngoko awukwazi ukusikhohlisa: uMartin Vrijland
I-Dutch top 3 ehlakaniphile kwihlabathi, ngoko awukwazi ukusikhohlisa
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	9 Julayi 2018	• 6 Comments
AmaDutch ahlakaniphe kakhulu kwihlabathi emva kweJapan ne-Finns. Oku kulinganiswa kwi-2016 kwaye ingxelo ungayifumana apha. Ubuhle kukuba siyazi nokuba sihlakaniphile kwaye awukwazi ukwenza nantoni na kuthi. Sinomgangatho ophakamileyo wemfundo kwaye sazi ukuba sinabantu abathengisayo. Sithanda ukucinga emva kwixesha lethu leVOC, apho sasinqoba khona ulwandle kwaye kwakukho ikoloni enkulu. Siziqhenkce ngobutyebi bethu obuqokelekileyo kwaye siyifumene into yokuba sizwe elicebileyo, kuba loo mphumo unengqiqo wokuba uhlakaniphile. Sinegama lomhlaba wonke kwimida yobugcisa, uncwadi, isayensi, imidlalo kunye njalo. Singaba mncinci ngokwelizwe, kodwa sikhulu ngokubhekiselele ekusebenzeni. Ngoko sinokuziqhayisa malunga nehlabathi lonke. Ukuba sivunyelwe ukunika umongameli omtsha we-EU kunye noMarko Rutte kamva, ngoko kuyafaneleka, kuba nathi sinokuziqhayisa ngeenkokheli zethu zobuqili kwezopolitiko. Ubuxoki obuncinane bezobupolitika ukulungisa kakuhle ishishini lethu, sifumana ngokufanelekileyo. Thina sihlakaniphile kwaye siyaziqhayisa. Sicinga ngokufihlakeleyo ukuba kufuneka ube yinto encane xa kulungile kwi-wallet yethu. Kwakhona sizathu sokuba siyazi ukuba ezopolitiko zixoki, kodwa ningacingi. Ukuba bafezekisa impumelelo yamazwe ngamazwe kwaye banceda umnakekelo wethu karhulumente (kunye nekhredithi yethu), sinelisekile. Sikholelwa ukuba sizwe esityebi nelichuma kwaye ngaphezu kwayo yonke into esiyifaneleyo. Emva koko, sinobuqili kunabanye!
Le veki ndathetha kwiJamani elalixelele indlela esinokuvuyela ngayo ukuba siphila e-EU kuba siye safumana inkululeko eninzi. Ngoku ke isiJalimane kwaye besisidengekile kwiMfazwe Yehlabathi yesiBili ukuba bakholelwe ku-Adolf Hitler, ngoko asikwazi ukuthatha loo maJamani. "Wir haben es nicht gewußt". Abazange baqonde oko kwenzeka ngokwenene phantsi kolawulo. Asizange senze iimpazamo ezinjalo ezintle kwiminyaka embalwa edlulileyo. Okanye ngaba le siqubulo esithi "Wir haben es nicht gewußt" ingakumbi ubungqina bokuba inkolelo-ntetho inamandla kangakanani? Unokutsho ezininzi zamaJamani, kodwa asikho abantu abazizilumko. Baye bahambisa ukuzonwabisa okuninzi kwaye bahlala phambili kule nto. Kungenjalo akukho nto yokusebenzisa. Yintoni eluncedo ukujonga umphumo onamandla weentengiso. Imfazwe Yehlabathi Yesibili ibonise indlela ipropaganda enamandla esebenza ngayo. Kungekhona nje ngexesha lemfazwe, kodwa ngokukodwa emva koko, xa amaJamani ebizwa ngokuba yinto enetyala, apho isizukulwana esikhoyo sakwazi ukugubha. Iingamashumi ezigidi zezigidi zamaJamani azizange ziqonde ukuba amaYuda angama-6 ayeza kugxothwa! Kwenzeka kanjani! Kwakungayigcinwa njani loo nto? Ngethamsanqa, le mbono yehlabathi yachazwa ngempumelelo emva kwemfazwe. Lo mfanekiso ngoku wonke umhlaba unamakhulu ezigidi zabantu kwi-retina. Nabani na ophethe ijelo angaphumelela ekuqinisekiseni wonke umntu kuwo onke amanqanaba eengcaphephe.
Ngaloo ndlela, amajelo asisona sikhulu esinamandla kufuneka ugcine abantu abanentliziyo engqiqo ngokwemibono yehlabathi. Abantu bathambekele ekulandeleni uluvo lwesininzi. Ngoko ukuba unako ukubeka imvakalelo ngeendaba ukuba umcimbi othile ubonakala uninzi njengenyaniso, uya kufikelela kubantu abanobuhlakani kwihlabathi. Oku kusebenza ngokuhlukileyo nabantu baseDatshi; Sincinci ngakumbi kunabanye.
Ngamanye amaxesha ndandixelelwa ukuba xa umntu enesibongo sesilwanyana, ezi ziyi-crypto-zamaYuda. Andiyazi ukuba oko kuyinyani kwaye andifuni ukufaka isandla kwi-anti-Semitic stigma, kodwa ngokwayo kubetha ukuba abanye abantu abadumileyo okanye intsapho banalo negama elinjalo: iMole, iPikoko, Inja, Inkunzi, njl. Amagama afanelekileyo asebenzayo kumashishini abeendaba, mhlawumbi, aya kuba ngumthombo we-crypto-jewish. Ndiye ndacaciswa ukuba oku kuya kubandakanya amaYuda azenza ngathi angamaYuda; uhlobo lokuziguqula. Into endizibuzayo yoko kutheni bayeza kwenza oko? Ngaba unokuba ngumYuda ngokusemthethweni ngaphandle kwamanqana okanye iintsimbi? Kukho kwakhona abahlala bengengamaYuda okanye abenzi beprogram. Ndicinga ukuba uEva Jinek ungowesiDatshi nje. Masingaqale sicinge ngeentlanga, imibala, isini kunye nezinto ezinjalo! Asisekho '40 /' 45! Woza! Eyona nto ukuba ucinga ukuba uluntu lwamaYuda luyinto yokufihla kunye nokuba kukho inkohlakalo enkulu kwimbali yehlabathi, ngoko unokucinga ukuba bahlala kwiindawo ezibalulekileyo, ngokukodwa kumaphephandaba, kumashishini efilimu okanye ezinye izikhundla ezichaphazela ubunzima, kodwa andikhumbuli nayiphi na inyaniso yembali ebandakanya ukunyaniseka kwembali. Ngamanye amaxesha kuthiwa siye sakhohliswa yiNkqantosi kwaye mhlawumbi igosa elikhulu kunazo zonke, kodwa Ndiphandile ngokwenene kwaye andinakucinga ukuba uYohn de Mol, umzekelo, ube ngumnikazi we-ANP ukugcina okokuthi 'ukufihla ukuphakama kobukhulu' buvalwe. Yiyiphi inkohliso!
Ngaloo nto, thina isiDutch siya kuba zihlakaniphile kwiidiya kwiindlela zokuphatha. Woza! Sifunda kakhulu kwaye siphumelele; apho idiot inentloko yakhe ukukholelwa ukuba sinokusetyenziswa kwaye kwaye nayiphi na indlela yokukhohlisa okanye i-propaganda ingasichaphazela! Xa sifunda iindaba, sifunda ukuba ngeliso elibukhali. Sifunda ukucinga ngokucokisekileyo, ukuxoxa kunye nokuxubusha kwiiyunivesithi zethu kwaye ngoko ke kungabizwa ngokuba ngabantu abaluleke kakhulu kwihlabathi. Asiyivulelekanga kwiingcinga ezingenangqondo okanye iingcamango zobuqhetseba. Imbono yethu yehlabathi ngokuqinisekileyo ayinemibala ngaphandle! Sifunda ezininzi iincwadi, ubukele ezininzi iifilimu, tyelela iimyuziyam kwaye ngoko ke siyazi kakuhle kakuhle. Musa ukuvumela omnye-okanye-omnye-uJan-Lul oza kubiza ukuba la masebe ezemidlalo alawulwa ngokupheleleyo. Awuyi kukhohliswa kukuba iincwadi esizifumana kwi-bookshop yethu kunye neefilimu esizibonayo kwi-Netflix okanye kwi-cinema nazo zibhekiselele ekuthinteleleni imbono yethu yehlabathi. Yithi nje ngokuqhelekileyo! Awuyi kubanga ukuba iimyuziyam zikhona ngenjongo efanayo? Woza! Unayo iminyuziyamu yobugcisa apho ubugcisa obukhethekileyo bubonakala khona; unemyuziyam yezembali, apho unokubona ubungqina bokwenene! Ngokuqinisekileyo akunakwenzeka eNetherlands! Ayikho ihlabathi lonke elingaphantsi kwelawulo linye iqela okanye elinye iqela elisoloko lithonya ingcamango yabantu! Uxolo, kodwa awukhulumi nabantu bethu baseDutch.
E-Netherlands ke ngoko unokufunda iphephancwadi okanye ubukele iindaba ngoxolo lwengqondo ngaphandle kokukhathazeka malunga nokuchaphazela iindlela. Oku akukwenzeka kwilizwe eliphucukileyo njengethu. Akunjalo okanye kunzima! Sisebulumko kwaye abantu abasebenza kumajelo aso bulumko kakhulu. Ngezinye amaxesha kuya kubakho ukuphosoka, kodwa ngokuqhelekileyo sijongana nabaqeqeshi. Kwinqaku elibalulekileyo, sinamajelo amaninzi nakwezinye iinkcukacha ngamanye amaxesha atyhola ngokubanzi, kodwa maxa wambi kunamacebo amaninzi phakathi kwabo. Ngethamsanqa, sinomsebenzi oyingqiqo njengoWillem Middelkoop kunye nabanye abakhonza loo nxalenye. Nabani na obiza ukuba zombini amajelo eendaba kunye neminye imithombo yeendaba echaphazela ukubonwa ngumbono nje kuphela kwaye akanakho ukuqonda ngolwazi kunye nenqanaba kuluntu lwethu. Woza! SiseNetherlands! Thina amaDutch siye sazihlakulela kwiindawo ezicebileyo kunye nolunengqiqo kwaye sinokuziqhayisa ngaloo nto. Kuzo zonke iinkalo zoluntu (ukusuka kwezobupolitika, ukuya kumajelo eendaba, ubugcisa, inzululwazi njalonjalo) singabalingcali. Awukwazi ukusikhohlisa kwaye silungiselele ishishini ngokufanelekileyo kwaye kukho ulawulo olusondeleyo. Musa ukukhohliswa kwaye uthembele nje kumaphephandaba kunye nezopolitiko. Ngokuqinisekileyo, qhubeka ubeka phambili. Bafuna njalo; ezigcina zibukhali. Ungowabantu abahlakaniphile kakhulu kwihlabathi (ukuba indawo ye-3e mhlawumbi impazamo nje)!
Uludwe lwekhonkco lovimba: oecd.org
Ukukhanyela kweNkohlakalo kunye nokukhunjulwa kukaWillem Alexander noMaximima ekampini yaseBuchenwald
I-89 Jarige iJaji yeJaji yaseJalimane ekugxothweni kokuphuma entolongweni
tags: 3, ANP, ukulwa nobuNtu, ukulwa nobuNtu, crypto, eziziimbalasane, yokuqhumisela, Ukunyuswa kweNkohlakalo, MaYuda, john de mol, YamaYuda, Abantu baseDutch, iindaba, zihlakaniphile, thu, umphezulu, hlabathi
9 Julayi 2018 kwi-19: 50
UMartin onokuqonda ndithetha ukuba umntu oqhelekileyo waseDutch ungomnye wesimo esiphezulu kunye nesingeniso kwi-NW (system) yokulandelela inkqubo. Ngoko ke ngamakhoboka angcono kakhulu okwangoku ulwela ukuba unqwenele njengelungu elite.
Ukuthobela irhafu, ukusebenza nzima njenge-hamster kwisondo, ukunikezela amandla okwaneleyo kumatrix wokulawula. Yaye ukuba uyabuza ukuba ingaba yincinci, uyaphendula nini? Akuzange kubekho u-No ebusweni bomgcini-khoboka, unqanyuliwe njenge-lemon ekhubeka kuze kube sekupheleni ..
URobin wabhala wathi:
9 Julayi 2018 kwi-21: 42
Mhlawumbi iinkokheli ze-VOC kunye ne-WIC nazo zazikhalaza amaJuda ngelo xesha, kodwa ngaphandle kwegama lezilwanyana. Abasunguli beminyaka yethu yegolide kunye nangaphezulu, nabo baqeshisi kunye nabahwebi bendoda engumntu ongenalucalulo. Kwaye ngamanye amaxesha abantu abangaqhelekanga ngokupheleleyo ngamaqela aqithiweyo esiqithi. Mhlawumbi bafana negazi elifanayo njengamapolitiko, iindaba, iindaba, ubukhosi ... ngokufutshane, iifisi.
Akukho dude! Akukho nto intle malunga 'nembali yethu kunye nosapho lwasebukhosini'.
Andizange ndilungele ukugwinya imfundiso engaphambili, ukuba ndiyiphule kwakhona xa ifunwa njengokuba ngam amazwi am. Ndiyena nje mna ...
Ndiyishiya ukucinga kubantu abafundayo, ababhetele ngakumbi kune-ULO. Kwaye kunjalo baxelela inyaniso.
Ixesha lomabonwakude kunye nepilisi ye-blue ye-ignorance ...
9 Julayi 2018 kwi-23: 46
... hayi, i-humor ayikwazi ukuphoswa ???? kwaye ungalibali ukuba i-6.000.000 ... shalom
9 Julayi 2018 kwi-23: 47
9 Julayi 2018 kwi-23: 48
Ngaba ngabafundi abaphakamileyo nabo bahlakaniphile? kwaye kutheni ufuna ukuwasela, eli nqaku lemihla ye-1 edlulileyo, ngokungahambi kakuhle ...
12 Julayi 2018 kwi-05: 12
Kukho umahluko phakathi kwabafundi abanezifundo.
Abafundi abaphakamileyo bayazi indlela yokukhetha impendulo echanekileyo kumbuzo okhethiweyo wokukhetha.
Umntu ohlakaniphile uyazibuza ukuba ngaba impendulo echanekileyo ikhona.
« Iprogaganda yeTransgender ngoku kwakhona kwi-Miss Universe ukhetho ngo-Miss Spain Angela Ponce
I-2023 Unyaka owaseYurophu uhlangene noMbuso wase-Ottoman »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.617.014